Game of Thrones dia tonga amin'ny App Store | Vaovao IPhone
Ilay andiany izay nahitam-pahombiazana nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny mpijery sy mendrika ny karazana loka rehetra avy amin'ny mpitsikera sy ny besinimaro nahatratra ny App Store ho lalao ho an'ny iPhone sy iPad. Ilay TellTale novolavolaina dia toa lasa manam-pahaizana manokana amin'ny fampifanarahana ny andian-tsarimihetsika amin'ny lalao ho an'ny fitaovana finday sy ny konsole video, satria taorian'ny fahombiazan'ny The Walking Dead, andiany fahombiazana lehibe hafa amin'ny fantsona AMC, ankehitriny dia tapaka miaraka amin'ny Game of Thrones, an'ny HBO.
Momba izany fizarana voalohany amin'ny enina totaliny izay miorina amin'ny trano Forrester. Ity dia lalao an'ny karazana «Adventure an-tsary» izay misy ny vokany amin'ny fanapahan-kevitra raisinao amin'ny alàlan'ny fanovana ny fizotry ny tantara sy ny fiafaran'ny toetranao. Mazava ho azy, ho fanampin'ny tarehin-tsoratra avy amin'ny andian-tantara amin'ny fahitalavitra, azonao atao ny mitsidika ny toerana malaza indrindra, toa ny King's Landing (King's Landing amin'ny fandikan-teny Espaniola) na The Wall (La Muralla), sy ny hafa tsy dia fantatra loatra, toy izany toa an'i Ironrath, tranon'ny trano. Ny lalao dia tsy manaraka ny fizotry ny andiany fahitalavitra, ary ity fizarana voalohany ity dia eo anelanelan'ny faran'ny vanim-potoana fahatelo sy ny fiandohan'ny fahadimy.
Tsy misy zavatra hafa azo lazaina momba ity lalao mahafinaritra ity izay manampy zavatra efa fantatsika momba ny tantara na izay efa hitantsika amin'ity horonantsary ity. Ny vidiny dia 4,49 € ho an'ity fanaterana voalohany ity, ary ireo nifandimby dia ho tonga amin'ny volana ho avy fa aorian'ny fandoavana ny vola mitovy aminy. Raha aleonao manangona vola kely mandoa ny fonosana feno izay mamoha ny fizarana rehetra azonao atao amin'ny $ 17,99 "fotsiny". Ireo fandoavam-bola ireo dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiharana mihitsy amin'ny alàlan'ny fividianana mividy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Game of Thrones dia tonga amin'ny App Store
Amin'ny teny Anglisy ihany, sa tsy izany?
NinType, manorata teny mihoatra ny 100 isa-minitra amin'ity kitendry ity ho an'ny iPhone